Izimonyo zemvelo ekuphileni kwansuku zonke - amathiphu okusetshenziswa okuwusizo
Izimonyo zemvelo kwesicelo sabo | I-Cosmetics & Wellness
Okufanele ukwazi ngezimonyo zemvelo
Imikhiqizo yokunakekela kufanele ihlanze isikhumba ngokuyinhloko futhi iyenze ibe yinhle. Imikhiqizo eminingi iyingozi empilweni. Izithako eziningi ze-creams zixhunyaniswa nezifo. Ngaleso sizathu, kufanele ukhethe izimonyo zemvelo futhi ugweme ukusebenzisa amakhemikhali kaningi ngangokunokwenzeka.
Yebo ngezimonyo zemvelo
Ama-gels okudakayo, ayenziwe ngezimonyo zemvelo, atholakala ezinhlobonhlobo zezinhlobonhlobo, nge-vanilla, igromegranate, i-orange orange nokunye okuningi. Ijelisi elijwayelekile lezawoti lisebenzisa amafutha amaminerali. Ezimonweni zemvelo uzothola amafutha kakhukhunathi. Ikakhulukazi esikhunjeni esomile noma esibucayi, kufanelekile ngoba ayinciphisi kakhulu isikhumba.
Yenza amathiphu ngezimonyo zemvelo
I-self-tanner ye-Organic nayo ibekezelela kahle isikhumba esibucayi, ngoba sinobubele ikakhulukazi esikhumbeni. Kodwa-ke akuyona into yokuzikhiya, ngoba zonke izikhumba ziphendula ngokuhlukile. Abazikhiphezeli be-Organic banezithako ezingenalutho nezingozi. Kumele umehluko we-self-tanner ebusweni nasemzimbeni. Ubuso buvezwe kakhulu elangeni kunomzimba.
Isikrini se-suns njengezimonyo zemvelo siqukethe kuphela isikrini selanga lesitokisi. Lezi zibonisa ilanga njengesibuko. Ikakhulukazi ngesikhumba esibucayi kufanele usebenzise ama-sun creams wemvelo. Uhlala esikhumbeni futhi ngaleyo ndlela kungaqinisekisa ukuvikeleka okwanele.
imikhiqizo Izinwele isitayela
Izinwele zekhanda nezinwele zifakela emvelweni - ikhwalithi ayiyona nje imvelo kuphela, kodwa futhi nabantu abanesikhumba esibucayi. Izinhlayiya zezinwele ze-Organic aziqukethe ama-propellants, amathini amatafula, amakha amnandi nama-silicones futhi namanje anika izinwele kahle futhi zikhanya kakhulu.
Phakathi naleso sikhathi, kunemibala yezinwele ezithombeni zokwemvelo. Imibala yemvelo igoqa izinwele njengejazi. Imifino yemvelo inikeza ukugcwala kwezinwele futhi kukhanye. Umbala wezinwele zezitshalo awunayo imithi yokuvikela, ayikho imibala yokufakelwa futhi ayikho izithasiselo zokufakelwa. Ama-dyes wezinwele zezitshalo azilimazi nesakhiwo sezinwele zakho.
Amafutha we-geranium kufanele aphumelele futhi anamandla njengevithamini A. Ama-bacterium akhiwe ngokukhethekile akhiqiza umswakama binder hyaluronic acid. Lokhu kwenza isikhumba sibonakale sincane futhi siphume isikhathi eside.
Kukhona nokukhethwa okubanzi kwemikhiqizo yemvelo yokwenza. Ngenxa yokuvumelana kwabo okuhle, zisetshenziswe ngokukhethekile ngezinhlobo zesikhumba ezibucayi. Ngokuvamile banezithako ezithandekayo futhi zithokozisa. Akudingeki ukwenze ngaphandle kwe-glitter futhi ukhanyise imiphumela uma kuziwa ezithombeni zemvelo. Izimonyo eziningi zikhiqizwa ngesisekelo semvelo.
With mascara yemvelo uthola eyelashes eside futhi evumayo. Iqukethe izithako ezifana namafutha ka-camelina. Lena amafutha omisa okusheshayo okubeka ngokushesha emoyeni, akusho ukufiphaza futhi aphuthi.
Ngaphandle kwezinti zokunakekelwa okungenambala, kukhona nokubomvu okuhehayo ezithombeni zokwemvelo. Izindebe zomlomo eziqukethe izitshalo ezingamaminerali, ama-preservatives noma ama-flavour okufakelwayo. Iqukethe amafutha anomsoco anomsoco, ama-extracts ashulayo kanye nama-organic axis. Ngakho-ke akunandaba uma uthola enye ye-lipstick emlonyeni wakho.
Izimonyo zemvelo kufanele zisetshenziswe ikakhulukazi isikhumba esibucayi, kodwa futhi uma unakekelwa ukunakekelwa kwemvelo kanye nemvelo.
Izimonyo zemvelo kuyindlela entsha. Yenzelwe ukondla isikhumba sakho futhi unciphise izinkinga zesikhumba. Izithako zikhishwe emithonjeni yemvelo.
Emikhiqizweni eminingi kukhona izinto ezinjenge- "nature", "natural" noma "organic". Kodwa-ke, kaningi akukhozinto zemvelo kule mikhiqizo. Funda kahle ukuthi yini ekufakweni. Ngakho ungatshela kanjani ukuthi izimonyo zemvelo ngempela? Usizo lunikeza iziqu zekhwalithi zezimonyo zemvelo. Izimpawu ongathembela zona, isibonelo, uphawu lwe-NATrue, uphawu lwe-ECOCERT kanye ne-BDHI Controlled Natural Cosmetics. Amabhizinisi analolu cingo angokwesibonelo isaziso, sante, dr. Hauschka noma iLavera.
Uyini umehluko phakathi kwezimonyo zemvelo nezimonyo eziphilayo?
Ngokuvamile, izimonyo zemvelo ziphutha ngephutha ngezimonyo eziphilayo. Izimonyo zemvelo sezivele zihlanganisa imikhiqizo enokuqukethwe okuphansi kwezithako eziphilayo. Ezingxenyeni zemvelo zokwakheka izimonyo zokwenziwa kwamakhemikhali namanje zivunyelwe ezingenakudingeka. Izimonyo ze-Organic, ngakolunye uhlangothi, ziqukethe ikhwalithi ephezulu, izinto ezibonakalayo zemvelo; azikho amakhemikhali noma ama-synthetic auxiliaries.
Kungani izimonyo zemvelo?
Izimonyo zemvelo kufanele zifake futhi zikhanyise isikhumba sakho. Akukhululekile ezingxenyeni ezilimazayo nezokushintsha amahomoni. Izimonyo zemvelo azinciphisi konke uma kuqhathaniswa nezimonyo zesikhumba ezijwayelekile, zibavuselela ekuziphatheni okungcono. Abakhiqizi bezimpawu zemvelo baqinisekisa futhi bakhuthaze ukuzibophezela kwezimo zokusebenza ezifanele kanye nokuvikelwa kwemvelo. Ngaphezu kwalokho, ukuhlolwa kwezilwane akuphelelwe umbuzo ezithombeni zezimonyo. Ezimonweni zemvelo, iphunga lemvelo kanye nama-dyes asetshenziswa kuphela. Amafutha okufakelwa angashesha ngokushesha izimbali ezibucayi. Ukusebenzisa ukwakheka okujwayelekile, kubonakala sengathi isikhumba ngaphansi kwezingqimba asikwazi ukuphefumula kahle. Izimonyo ezinezithako zemvelo, nokho, zibukeka zikhanya futhi ziqabula.
Kuyini ukuguqulwa kwezimonyo zemvelo?
Izimonyo zemvelo zisebenzise amandla emvelo wesikhumba, ngakho-ke ingabangela ukuwohloka kokuqala. Ukungcola kungakhula ekuqaleni, kuze kube yilapho isikhumba sishintshe ekuzimeni komthetho. Isibonelo, ngokungafani nama-creams wendabuko ebusuku, awekho amafutha noma amafutha asetshenziswa ebusuku, kodwa i-serum ene-aqueous. Ngesikhumba esomile, lokhu kungase kungavamile okwesikhashana. Kodwa isikhumba asizizwa sinzima futhi singabuyela kahle ebusuku. Kufanele unike isikhathi sesikhumba, kubalulekile ukuhlala uchungechunge lomkhiqizo. Isikhumba sithatha cishe inyanga ukulungisa.
Kunezinto eziningi ezinhle ezithombeni zokwemvelo. Isikhumba sakho sizojwayela futhi sibonakale ngokubukeka okuhle.